Vula umnxeba · Escapism · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Sifuna amagcisa amahlanu / abayili / abenzi, Ngubani oya kuba nomdla ekwenzeni umsebenzi wokudibana njengenxalenye yeprojekthi yeqela.
Imveliso yokugqibela iya kuvumela iindwendwe ukuba zihambe ngamabali owabalisayo ngokusekwe kubuni kunye nokukhetha komsebenzisi. Amava asiphumo aya kuchongwa sisazisi somdlali kunye nendlela abasabela ngayo kukhetho oluyalelwa.
Siyathemba ukuba umdlalo wenza ukuba amagcisa asete imigaqo-nkqubo kunye nemigaqo yokuzibandakanya kwimixholo abasebenza nayo.
Umculi ngamnye uya kunikwa izixhobo zokuyila kwaye avelise isiqwenga esisebenzisanayo esiya kuthi emva koko sibe kwimeko yeqela elibonisa.
** Eli lithuba elihlawulelwayo **
Ngubani onokufaka isicelo
Lo mnxeba uvulekileyo ujolise kuwo Amagcisa eQTIBPOC asebenza eBerlin
Kukho ukubakho kweengcali zeQTIBPOC zokuthatha inxaxheba kude.
Ixesha elibekiweyo kunye neemfuno:
Ukusukela ngoMeyi ukuya ku-Agasti ka-2021 amagcisa angaxhamla kwiminikelo yokusebenzela kunye nelebhu yoyilo phantsi kwesikhokelo soMlawuli wezobuGcisa uMadhumita Nandi ngomboniso wamava omdlalo owenzeka ngoSeptemba, oveliswe yiOyoun kwaye uxhaswe ngemali nguFonds Soziokultur.
Njengeqela siza kukunceda uqonde ukuba ungaluphumeza njani unxibelelwano ngaphakathi komsebenzi wakho kodwa ke silindele ukuba wenze iiasethi nokuba ngaba ziifoto ezi, iividiyo zabalinganiswa be-3D njl.
Ukufaka isicelo okanye ukufumanisa ngakumbi nceda thumela i-imeyile ku hallo@oyoun.de.
Xa ufaka isicelo, nceda ufake:
max. Amagama angama-500 ukuya kumbuzo: "Loluphi uhlobo lomsebenzi ongathanda ukuwenza kwaye ungagxininisa njani ekusebenzisaneni?"
izakhono onazo: umz. ukupeyinta, ukufota
imizekelo yomsebenzi (ipotifoliyo, i-reel njl.
* Umhla wokugqibela ngo-Epreli 30th *
Le projekthi ixhaswa ngemali ziiFonds Soziokultur // INKCUBEKO YOKUQALA